Ikhaya leHolide elitofotofo eVerbania elineBalcony
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguVita - BELVILLA
UVita - BELVILLA unezimvo eziyi-31 zezinye iindawo.
Kutheni uhlala apha?
Eli khaya leholide litofotofo eVerbania yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kwezothando kwingingqi ye-Italian Lakes. I-Nestles phakathi kweyona ndawo intle yendalo, eli khaya line-whirlpool kunye nebalcony enombono ogqibeleleyo wendawo engqongileyo.
Izinto zokwenza ngeenxa zonke
ILake Intra yi-2 km nje ukusuka kwindawo yokuhlala apho unokonwabela ukukhwela isikhephe. Uhambo losuku kwiLake Maggiore lunokwenzeka apha. Ungaphinda uhambe uhambo kunye nokuhamba ngebhayisekile kwindawo yaseStrona Valley. Izixeko zaseComo, Bergamo, Bellagio, kunye neBrescia zilungile ukuphonononga uhambo lwemini. I-Palazzo Borromeo emangalisayo kunye ne-Il Vittoriale degli Italiani inomdla wokujonga.
Yintoni onokuyilindela kwisithuba
Kumgangatho wokuqala, igumbi lokulala elinebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela eline-whirlpool libonelelwe wena. Ikhaya linezifudumezi zerhasi ezisembindini ngomrhumo omncinci. Indawo yokupaka iyafumaneka nakwindawo.
Okungakumbi ngokuhlala kwakho
Isikhululo seenqwelomoya saseLugano sikumgama oziikhilomitha ezingama-29 ukusuka eVerbania.
Amaxesha okungena kunye nokuphuma yi-2-6 PM kunye ne-8-10 AM ngokulandelelanayo.
Uyilo: Kumgangatho woku-1: (ikhitshi elivuliweyo, Indawo yokuhlala/igumbi lokutyela(iTV(isathelayithi)), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(i-whirlpool, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), balcony, ukufudumeza(ombindi, igesi))
Umbuki zindwendwe ngu- Vita - BELVILLA
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Verbania